SARUDZA MUTAURO Albanian Amharic Arabic Armenian (West) Bislama Cambodian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Chuukese Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Italian Japanese Kikongo Kimbundu Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lithuanian Luo Malagasy Maya Mixe (North Central) Mizo Moore Myanmar Ndebele Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Palauan Papiamento (Curaçao) Polish Ponapean Portuguese (Brazil) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Venda Vietnamese Wolaita
“Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari uye runobatsira pakudzidzisa, pakutsiura, pakururamisa zvinhu, pakuranga nokururama.”—2 TIMOTI 3:16.
VANA vanofanira kudzidziswa chokwadi pamusoro paMwari. Chokwadi ichi vangachidzidza kupi? MuBhaibheri, bhuku rechitendero rinonyanya kuremekedzwa kupfuura mamwe ose pasi pose.
Bhaibheri rakaita setsamba inobva kuna Mwari. MuBhaibheri Mwari anobudisa unhu hwake uye anopa vana vake vose mazano akanaka, vangava vaduku kana vakuru. Cherechedza zvimwe zvinodzidziswa neBhaibheri uye kuti vana vangadzidzei pazviri.
Sezvataona pamienzaniso iyi, zvidzidzo zviri muBhaibheri zvinogona kubatsira vana kuti vazokura vari vanhu vanoonga, vanoremekedza uye vanonzwira vamwe tsitsi. Asi ndiani anofanira kudzidzisa vana zvidzidzo izvi?
Mwari anoda kuti tizivei nezvake?
▪ Zvinodzidziswa neBhaibheri: “Imi, mune zita rokuti Jehovha, imi moga ndimi Wokumusorosoro kumusoro kwenyika yose.”—Pisarema 83:18.
Chidzidzo: Mwari Munhu chaiye anotova nezita rinomusiyanisa nevamwe.
▪ Zvinodzidziswa neBhaibheri: “Jehovha anoongorora mwoyo yose, uye anonzwisisa zvose zvinodiwa nepfungwa. Kana ukamutsvaka, achaita kuti umuwane.”—1 Makoronike 28:9.
Chidzidzo: Jehovha Mwari ane hanya nesu tose, kusanganisira vana vaduku. (Pisarema 10:14; 146:9) Anoda kuti tidzidze nezvake.
▪ Zvinodzidziswa neBhaibheri: ‘Musatambudza nherera chero ipi zvayo. Kana ukaitambudza, iyo ikandichemera, chokwadi ndichanzwa kuchema kwayo.’—Eksodho 22:22-24.
Chidzidzo: Jehovha anoteerera kunyange minyengetero yevana vaduku. Tinogona kutaura naMwari nguva dzose tichimuudza zviri kutsi kwemwoyo yedu.
▪ Zvinodzidziswa neBhaibheri: “Vaiedza Mwari vamuedzazve, uye vakarwadzisa Mutsvene waIsraeri.”—Pisarema 78:41.
Chidzidzo: Zvatinotaura nezvatinoita zvinogona kufadza kana kuti kugumbura Jehovha, saka tinofanira kutanga tafunga tisati tataura kana kuita chimwe chinhu.
Tinofanira kuona sei vanhu vakasiyana nesu?
▪ Zvinodzidziswa neBhaibheri: “Mwari haasaruri, asi murudzi rwose munhu anomutya uye anoita zvakarurama anogamuchirwa naye.”—Mabasa 10:34, 35.
Chidzidzo: Kana Mwari achida vanhu vanobva kwakasiyana-siyana, isuwo hatifaniri kusarura vamwe nemhaka chete yokuti vane ganda rakasiyana neredu kana kuti zviso zvavo zvakasiyana nezvedu.
▪ Zvinodzidziswa neBhaibheri: ‘Garai makagadzirira kuzvidzivirira kune munhu wose anokubvunzai chikonzero chetariro iri mamuri, asi muchiita izvozvo nounyoro noruremekedzo rukuru.’—1 Petro 3:15.
Chidzidzo: Kana tichitaura nevamwe zvechitendero, tinofanira kutaura zvatinoziva tiine chivimbo asi tichizviita nounyoro. Tinofanirawo kuremekedza vanhu vechitendero chakasiyana nechedu.
Tinofanira kubata sei vanhu vomumhuri medu?
▪ Zvinodzidziswa neBhaibheri: “Vana, teererai vabereki venyu pazvinhu zvose, nokuti izvi zvinofadza kwazvo munaShe.”—VaKorose 3:20.
Chidzidzo: Vana vanoteerera havangoratidzi kuti vanoda vabereki vavo asiwo kuti vanoda kufadza Mwari.
▪ Zvinodzidziswa neBhaibheri: “Rambai muchishivirirana nokukanganwirana nomwoyo wose kana paine munhu ane chikonzero chokunyunyutira mumwe. Jehovha zvaakakukanganwirai nomwoyo wose, imiwo itai saizvozvo.”—VaKorose 3:13.
Chidzidzo: Vamwe vanhu, kusanganisira vomumhuri yedu, vangatigumbura pane dzimwe nguva. Tinofanira kuvaregerera kana tichida kuti Mwari atiregererewo.—Mateu 6:14, 15.
Nei tichifanira kuva vanhu vakatendeseka uye vane mutsa?
▪ Zvinodzidziswa neBhaibheri: ‘Bvisai nhema, uye mumwe nomumwe wenyu ngaataure chokwadi nomuvakidzani wake.’—VaEfeso 4:25.
Chidzidzo: Patinotaura chokwadi tinenge tichitevedzera Mwari uye izvozvo zvinomufadza. Kana tikava netsika yokureva nhema, tinopedzisira taita semuvengi waMwari Dhiyabhorosi, “baba venhema.”—Johani 8:44; Tito 1:2.
▪ Zvinodzidziswa neBhaibheri: ‘Itirawo vamwe zvaunoda kuti vakuitirewo.’—Mateu 7:12, Bhaibheri Dzvene muChiShona Chanhasi.
Chidzidzo: Tinofanira kuva nehanya nezvinofungwa uye zvinodiwa nevanhu vomumhuri medu nevamwe vatakavakidzana navo. Kana ‘tikanzwira vamwe ngoni,’ vachatibatawo zvakanaka.—1 Petro 3:8; Ruka 6:38.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Vana Vanofanira Kudzidziswei?
w11 8/1 pp. 4-6